December 22, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Five arrested in Ethiopia for arson attack on mosques: state government – Reuters
Ethiopia News December 22, 2019
Five arrested in Ethiopia for arson attack on mosques: state government ReutersSii akhriso
Athletic Bilbao oo taako u dhigtay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Santiago Bernabeu …+SAWIRRO
Cayaaraha December 22, 2019
(Madrid) 23 Dis 2019. Athletic Bilbao ayaa taako u dhigtay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Santiago Bernabeu, kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 0-0 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid Iyo Athletic Bilbao ee horyaalka La Liga
(Madrid) 22 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Real Madrid Iyo Athletic Bilbao kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka La Liga dalka Spain. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Real Madrid Iyo Athletic Bilbao: Real Madrid XI: Athletic Bilbao XI: […]Sii akhriso
Lazio oo ku guuleysatay koobka Italian Super Cup kaddib markii ay ka adkaatay kooxda Juventus…+SAWIRRO
(Riyadh) 22 Dis 2019. Kooxda Lazio ayaa ku guuleysatay koobka Italian Super Cup, kaddib markii ay kaga adkaatay dhigeeda Juventus 1-3 kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen King Saud University Stadium ee ku yaala magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia. Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay bar-bardhac 1-1 ah. Daqiiqadii […]Sii akhriso
Chelsea oo guul muhiim ah ka soo gaartay kooxda Tottenham oo ay booqatay kulankii adkaa ee London Derby…+SAWIRRO
(London) 22 Dis 2019. Chelsea ayaa guul ka soo heshay kooxda Tottenham Hotspur oo ay booqatay kulankii London Derby, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2 kulankoodii 18-aad ee horyaalka Premier League dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Chelsea. Daiiqadii 12-aad Chelsea ayaa hoggaanka […]Sii akhriso
Madaxwayne Ku-xigeenka Puntland oo degmada Caluula ka daah furay Gurmadka Gardafuu+Sawirro
Soomaaliya December 22, 2019
Caluula.(SONNA):- Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Mudane, Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho ku tegay degmada Caluula ee Gobolka Gardafuu, halkaasi oo uu madaxweynuhu ka daah-furay gurmad la gaarsiiyay dadka ay roobabku saameeyeen ee Gobolka Gardafuu. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si rasmi ah u Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Isbedelka cimilada Waxaa lagu tiriyaa mid kamid ah dhibaatooyinka waaweyn ee dunida ka jira qarnigaan, Soomaaliya oo kamid ah dalalka soo koraya ee u nugul qatartaan ayaana hadda ka shaqeeneysa ansixinta Siyadadda qaran ee Isbedelka Cimilada oo ay soo diyaariyeyn Agaasinka deegaanka iyo isbadalka cimilada ee xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya. Sii akhriso
Wasiirka Warfaafinta XFS iyo wafdi uu hoggaaminayo oo lagu soo dhaweeyay Sucuudiga+sawirro
Muqdisho(SONNA) Wafdigii uu hoggaaminayay wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa gaaray dalka Sucuudiga,halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen madaxda ugu sareysa dhinaca dalxiiska dalkaasi. Sida uu Wakaaladda (SONNA) u sheegay agaasimaha waaxda Dalxiiska wasaaradda Warfaafinta C/risaaq C/llaahi Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Juventus Iyo Lazio ee Final-ka Supercoppa Italiana
(Yurub) 22 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Juventus Iyo Lazio kulanka goor dhow soo gali doona ee Final-ka Supercoppa Italiana. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Juventus Iyo Lazio: Juventus XI: Lazio XI: Gool FM.Sii akhriso
Watford oo guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Man United oo marti ugu aheyd garoonka Vicarage Road…+SAWIRRO
(England) 22 Dis 2019. Watford ayaa guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Man United oo marti ugu aheyd garoonka Vicarage Road, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay barbaro 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo […]Sii akhriso